Nigranee | » त्यो केटी त लास्टै चालु छे… त्यो केटी त लास्टै चालु छे… – Nigranee
त्यो केटी त लास्टै चालु छे…
निगरानी October 26, 2019 120
केही युवकहरु चियापसल अगाडि बसेर चियाको चुस्की र चुरोटको सर्कोसँगै गफिँदै थिए । सडकमा एउटी युवती हिँड्दै गरेकी देखिइन् । एउटाले आफ्ना साथीहरुलाई त्यता हेर्न संकेत गर्यो । सबैले त्यतै हेरे । एउटाले प्याच्च भन्यो ‘ए त्यो केटी ? त्यो त लास्टै चालु छे ।’
यस्ता घटनाहरु कैयौं चोकका चियापसलअगाडि भइरहेका थिए, भइरहेका छन् र हाम्रो समाजलाई हेर्दा प्रस्ट छ भविष्यमा पनि भइरहनेछन् । हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यस्तै भइसकेको छ । समाजमा युवकहरुले यस्तै संस्कार सिकिरहेका छन् । नयाँ पुस्ता पनि यस्तै संस्कारमा अभ्यस्त हुँदैछन् । महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रुपमा हेर्ने संस्कारबाट सुरु भएको यो सिलसिला आफूले चाहेको नपाएपछि खोट लगाउनेमा पुगेर अन्त्य हुने गरेको छ ।
एकपटक एउटा स्यालले बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा रुखमा अंगुर फलेको देख्यो । अंगुर केही उचाइमा थियो । स्यालले उफ्रेर अंगुर टिप्ने प्रयास गर्यो तर सकेन । स्यालले निकै बेर प्रयास गर्यो तर केही सीप लागेन । अन्त्यमा हार खाएपछि स्यालले ‘यस्तो अमिलो अंगुर के खानु’ भनेर हिँड्यो । हाम्रो समाजमा महिलामाथि लगाइने यसप्रकारका ट्यागहरु त्यही स्यालको नियति भोगेका पुरुषहरुले लगाएका हुन् ।
‘चालु’ अर्थात यौनका लागि सहजै उपलब्ध हुने महिला । यो ट्याग धेरै महिलाहरुलाई लाग्ने गरेको छ । हुन सक्छ यसरी ट्याग लाग्नेहरुमध्ये कुनै कुनै अपवादको रुपमा साँच्चै ‘चालु’ पनि थिए होलान् । तर, सीमित अपवादको रुपमा पाइने त्यस्ता महिलाको ट्याग जोसँग रिस उठ्यो उसैलाई लगाइदिने संस्कार नै बनिसकेको छ ।
यसरी सडकछेउ बसेर ‘चालु’को ट्याग लगाउनेहरु त्यहाँसम्म त्यसै पुगेका हुँदैनन् । सुरुमा उनीहरु ट्याग लगाउँदैनन् बरु ती महिलालाई भेटेपछि नजिकिने प्रयास गर्छन् । नजिकिँदै गएपछि आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने प्रयासमा तल्लीन हुन्छन् । आफ्नो चाहना पूरा गराउन हरतरहको प्रयास गर्छन् । यदि प्रयासमा सफल भए ठिकै छ नभए ट्याग लगाइदिन्छन् । यो ट्याग महिलाको चरित्रको मानक होइन बरु यसरी ट्याग लगाइदिने पुरुषको असफलता र कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो ।
केही अर्काथरी हुन्छन् । उनीहरुले ती महिलाबाट कुनै समय आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्ने अवसर पाएका हुन्छन् । उनीहरुलाई ती महिलाले उनीहरुमाथि कति विश्वास गरेकी थिइन् र कति जोखिम लिएर त्यति अगाडि बढेकी थिइन् भन्ने कुरामा चासो हुँदैन । बस् आफ्नो इच्छा पूर्तिमा मात्र चासो हुन्छ । जबसम्म इच्छा पूरा भइरहन्छ तबसम्म केही हुँदैन तर जब इच्छा पूरा हुन बन्द हुन्छ त्यसपछि ती महिलामाथि त्यही ‘चालु’को ट्याग लाग्छ ।
हाम्रो समाजमा कैयौं पुरुषहरुको सोचाइ अझै पनि त्यही ठाउँमै छ । अर्थात्, महिलालाई पायो भने ‘युज’ गर्ने अनि ‘थ्रो’ गर्ने । तर, समयसँगै महिलाहरु कतिसम्म एड्भान्स भइसके भन्ने कतिपयले पत्तै पाउन सकेका छैनन् । हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय भइरहेका केही घटनाहरुले पुरुषको यो सोचले कतिसम्म ब्याकफायर गरिसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
हामी पुरुषहरुलाई लाग्छ महिलाहरुले हाम्रो नियत बुझेका छैनन् । तर होइन, महिलाहरु धेरै अगाडि बढिसके । उनहिरुले हाम्रो इन्टेन्सन नबुझ्ने होइन सबै बुझेका छन् । बुझेर पनि हामीलाई त्यो सब दिइरहेका छन् जो हामी चाहन्छौं । किनकि उनीहरुको इन्टेन्सन हामीभन्दा माथि छ । उनीहरु हामीभन्दा धेरै अगाडि ‘चोरमाथिको चण्डाल’ भइसकेका छन् ।
लिभिङ टुगेदरमा लामो समय साथमा बसेका महिलाले पछि बलात्कारको अभियोग लगाउने । पहिले सबैथोक गर्न दिने पछि बलात्कारको अभियोग लगाउँछु भनेर ब्ल्याकमेल गरी पैसा असुल्ने, हनीट्रयापमा पारेर अपहरण गरी पैसा असुल्ने जस्ता घटनाहरु पछिल्लो समय सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यी तिनै चोरमाथिका चण्डालहरुले गरेका हुन् । तर, तीतो सत्य के हो भने यो सबै त्यही चालुतन्त्रको ब्याकफायर हो । उनीहरुलाई त्यो स्थानमा पुर्याउनेहरु तिनै पुरुषहरु हुन् जो पहिले उनीहरुलाई युज गर्ने प्रयासमा थिए ।
ती महिलाहरुले बुझेका छन् – यसले मबाट इच्छापूर्ति गरेपछि मेरो बारेमा चोकका चिया पसलमा गफ लडाउँछ । साथीहरुसँग मेरो अंग प्रत्यंग शब्दको माध्यमबाट प्रदर्शन गर्छ । मलाई सार्वजनिक स्थलमा नङ्ग्याउँछ । यति बुझिसकेका ती महिलाले आफू सार्वजनिक ठाउँमा नाङगिनुभन्दा त्यही पुरुषलाई नै नङ्ग्याउने सोच बनाउँछन् । यसैको परिणाम नयाँ किसिमका अपराधको वृद्धि भएको छ ।
यौनको व्यापारमा लागेका धेरै महिलाहरु पहिले शोषणमा परेकाहरु छन् । उनीहरु पहिले यौनलाई होइन आफ्नो सीप, क्षमता प्रयोग गरेर कमाइ गर्ने प्रयासमा थिए । तर, जहाँ जाँदा पनि पुरुषहरुको गिद्धेदृष्टि परेपछि उनीहरु बाध्य भएर यौनको व्यापारमा लागेका हुन् । आखिर आफ्नो शरीरलाई कुनै न कुनै पुरुषको खेलौना बनाउन बाध्य हुनै पर्छ भने किन बाध्यतामा अरुको उपभोगको बस्तु बनिदिने । यसैपनि कसैको उपभोग्य वस्तु बन्नु नै छ भने उपभोग गर्न दिएवापत आफूले लाभ किन नलिने ? यौनधन्दामा लागेका कैयौं महिलाहरुको वास्तविकता यही हो । पुरुषले सित्तैमा शोषण गर्ने र त्यो शोषणबाट उम्किने बाटो नपाएपछि उनीहरुले बाध्य भएर त्यसैलाई पेशा बनाएका हुन् ।
जवानी र पैसाको कारोबार
पहिलेपहिले पुरुषहरुले महिलालाई ललाइफकाइ विभिन्न प्रलोभन दिएर लाभ लिन्थे । समयसँगै यसको रुप फेरिएको छ । अहिले यसको कारोबार हुन्छ । कारोबार अर्थात व्यापार । व्यापार पैसा लिएर मात्र हुँदैन, विभिन्न लाभका पदमा नियुक्ति वा राम्रो अवसर प्राप्तिका लागि पनि जवानी बिक्री भइरहेका छन् ।
समाजमा महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई सम्मान गर्ने संस्कारको अन्त्य हुँदैछ । महिलाबाट जवानी लिने र पुरुषबाट पैसा असुल्ने संस्कार विकसित भइरहेको छ । पहिले पहिले पुरुषले महिलालाई वस्तु ठान्थे अहिले महिलाले पुरुषलाई पनि वस्तु ठान्न थालेका छन् । पुरुषलाई वस्तु मात्र होइन मुर्गा ठान्न थालिसके, सुनको अण्डा दिने मुर्गा । यो सबै एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने सम्मान हराउँदै गएको र जसरी हुन्छ लाभ लिने संस्कार मौलाउँदै गएको संकेत हो ।
केही वर्षअघि म साथीहरुसँग गफिँदै थिएँ । त्यही बेला एउटी युवती अगाडिबाट हिँडिन् । मेरो एउटा साथीले भन्यो ‘यो केटी त लास्टै चालु छे ।’ मेरो अर्को साथीलाई राम्रो रिस उठेछ ।
उसले जंगिँदै सोध्यो –‘तैंले केही गरेको छस् ?’
‘अरु कसैले केही गरेको देखेको छन् ?’
‘त्यसो भए भुत्राको चालु ?’
दुर्भाग्य, मेरो जंगिने साथीजस्ता व्यक्तिहरु हाम्रो समाजमा निकै कम छन् । यही कमीका कारण अहिले जवानी बिक्रीको वस्तु बनेको छ ।